ပန်းချီ | Oleg Soloviev အနုပညာရှင်
Raven. ရေနံပန်းချီ 90x70cm. 45 000p.
ဆီဆေးပန်းချီ, ပတ္တူ 90x70cm, တိရိစ္ဆာန်, Avant-garde, pop art ရေနံပန်းချီ, ပတ္တူ 90x70cm, တိရိစ္ဆာန်, Avant-garde, pop art အတွင်းပိုင်းပန်းချီကား […]
တိရိစ္ဆာန်ရစ်သမ် Z, ပိုက်ဆံချည်ထည်ပိတ်, ဆီ, 90х70см, 40 000p.
တိရိစ္ဆာန်ရစ်သမ် Z တိရိစ္ဆာန်စည်းချက် Z ပူးပေါင်းကြံစည်မှု. ပန်းချီ, ပိုက်ဆံချည်ထည်ပိတ်, ဆီ, 90х70см. စုပေါင်း. ပန်းချီကား, ပတ္တူပေါ်တွင်ရေနံ, 90x70cm. ပြည်ထဲရေးပန်းချီ […]
စကြ ၀ .ာ 2018, ပိုက်ဆံချည်ထည်ပိတ်, ဆီ, 90х70см 35 000p.
စကြ ၀ .ာ 2018, ပိုက်ဆံချည်ထည်ပိတ်, ဆီ, 90x70cm Cosmocote ၏အတွင်းပိုင်း၌ပန်းချီကား 2018, ပိုက်ဆံချည်ထည်ပိတ်, ဆီ, 90x70cm ကြောင်အဖြူနှင့်အတူအနက်ရောင်တီရှပ် Tyson Kosmokot […]
ဝေလငါးများ, 70x90cm ရေနံပန်းချီ. 30 000p.
ဝေလငါးများ. (70x90cm ရေနံပန်းချီ, ကြောင်, ကြောင်, ကြောင်, ကြောင်) အတွင်းနံရံတွင်ပန်းချီဆွဲခြင်းကြောင်နှင့်တီရှပ်ဒီဇိုင်းဆွဲသည် (စက္ကူ, မင်, […]
ညစာ, 60х80см, ပိုက်ဆံချည်ထည်ပိတ်, ဆီ. 40 000p.
ညစာ. ခေါင်းပေါ်မှာခြင်. ဆီ 80x60. 2008
ပီတာစဘတ်၏ခေါင်မိုး. 60х45, စက္ကူ, gouache, 2001
Stieglitz အကယ်ဒမီ၏ဒီဇိုင်းဌာန၏အဆောက်အ ဦး, Chaykovskiy လမ်း, 60x86, စက္ကူ, gouache, 2002
နွေရာသီဥယျာဉ်အားဖြင့် Fontanka အပေါ်တံတား. City ရှုခင်း.
Pestel လမ်း, ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, 86x40, စက္ကူ, gouache, 2002
ဘဏ်တံတား, 80x60, စက္ကူ, gouache, 2002
Anichkov တံတား, 80x40, စက္ကူ, gouache, 2002
ပန်းချီ, картины маслом, гуашью и акрилом
Живопись – это одно из самых старинных искусств на земле. Из века в век художники совершенствовали своё мастерство, использовали новые и новые материалы, создавали новые стили, особенности наложения мазков… И сегодня ပန်းချီ, картины маслом, гуашью, акрилом не смогла вытеснить даже качественная печать на холстах или бумаге, которая позволяет получить картину быстро и дёшево. Поэтому всё большее количество людей хотят заказать живопись, картины у опытного художника, အတွင်းပိုင်းများအတွက်သီးသန့်ဖြေရှင်းချက်ဖန်တီးတံ့သော, လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးအဘို့မူရင်းနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောလက်ဆောင်တစ်ခု, စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်ချစ်ရသူ. ပန်းချီကိုလည်းမူရင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့နိုင်ပါတယ်ဥပမာ - အဘို့,, ဓါတ်ပုံတွေကို T-ရှပ်အင်္ကျီကိုအလှဆင်နိုင်ပါတယ်, ခွက်များနှင့်အမှတ်တရပစ္စည်းများ, အမြတ်အစွန်းများအတွက်လက်နက်ကိရိယာတခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အရာ.
သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပစ္စုပ္ပန်နှင့်ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများရှာဖွေနေ, ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးမှလက်ဆောင်ကိုရွေးချယ်ပါနေတယ်ဆိုရင်, သင်ချောအလုပ်တို့တွင်ညာဘက်ပုံစံကိုမတှေ့နိုငျပါလျှင်, ထိတှေ့! ဂရုတစိုက်, မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့စျေးသက်သာသောဆိုရှုပ်ထွေးမှုအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်မှစျေးနှုန်း. အဆိုပါပုံကြမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးများသောအားဖြင့်နာရီအနည်းငယ်ကြာ, တစ်ချိန်တည်းမှာရှိသမျှတို့ကိုငါသင့်ရဲ့ဆန္ဒကိုနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်. ဒါကြောင့်ရလဒ်, ငါပူဇော်, အမြဲမူရင်း. သင်တစ်ဦးသီးသန့် image ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်, အရာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, သင်အလိုရှိအဖြစ်! ၏အဓိကအဆင့်ဆင့်:
1. ရှေးခယျြသောပစ္စည်းရစေတယ်ဖြစ်ပါတယ်, နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အခြောက် (ဥပမာအား, ရစေတယ်ပတ္တူသို့မဟုတ်ကတ်ထူပြား).
4. Затем при помощи выбранного материала и инструмента (ဥပမာအား, масла и кисти или мастихина) создаю картину, подбираю тона и прописываю детали полотна.
• учёт ваших пожеланий (стиль работы, степень прорисовки, желаемый формат, особенности фона, материал работы (acrylic, ဆီ, гуашь и т.д.);
• если планируется украшать изображением сувениры, ဥပမာအား, футболки, я разработаю проект или переведу изображение в электронный вид.